बिबाह भन्दा पहिले यौनसम्पर्क गर्ने कि नगर्ने ? [भिडियो हेर्नुहास्] « Today Khabar
बिबाह भन्दा पहिले यौनसम्पर्क गर्ने कि नगर्ने ? [भिडियो हेर्नुहास्]
प्रकाशित १२ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०८:०२
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालीहरुका बिच चर्चित युट्युबर सोनीका रोकाय अब फेरि नयाँ रुपमा प्रस्तुत हुने भएकी छिन् । दी शोनीका शो बाट युट्युबको दुनियाँमा फर्केकी सोनीका फेरि जनताका बिचमा गएर उनीहरुका धारणा लिएर आउँने भएकी छिन् । यो भन्दा पहिले पनि उनले यस्तैं कार्यक्रम चलाएर चर्चामा आएकी थिइन् ।
यसमा सोनीकाले कुनैं एक प्रश्नमा धेरैं व्यक्तिहरुको विचार बुझ्ने गर्छिन् । विशेष गरेर नेपाली समाजमा साँघुरो रुपमा हेरिएको यौनका विषयमा रोकाया अलिक धेरै खुल्न चाहान्छिन् । पछिल्लो पुस्ताका बिचमा उनी चर्चामा रहनुको एक मुख्य कारण यो पनि हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
अहिले नेपाली समाजमा विशेष गरेर शहरी क्षेत्रमा विवाह भन्दा पहिले केटाकेटी सँगैं बस्ने गर्दछन् जसलाई लिभिङ टुगेदर भन्ने गरिन्छ । उनले यो श्रृङखलामा विवाह भन्दा पहिले यौनसम्पर्क राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर युवा युवत्तिलाई प्रश्न गरेकी छिन् । यसको जवाफमा सबैंले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । यस सम्बन्धमा उनले फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दैं लेखेकी छिन्,
काम गरेपछी कमाईको आश पनि हुन्छ । कमाईका स्वरुप फरक फरक हुन्छन । लाईक कमेन्ट सेयर र डिसलाईक पनि मेरो कमाई हो । सामाजीक महत्वका काम गर्दा राम्रा कमेन्ट हरु आउछन तर त्यो अनुपातमा त्यस्तो राम्रो काम हेर्ने दर्शक हुँदैनन् । मेरा लागी “आफ्नै पारा” को बेग्लै महत्व छ ।
मेरा दर्शकहरुले भरपुर मनोरन्जन पश्चात अलीकती गाली पनि गरेर छोड्नुहुन्छ जुन म खुशी खुशी स्विकार्छु । अहिले ब्यापक प्रचलनमा रहेको “लिभिङ रिलेशनसिप र बिहे अगाडीको शाररीक सम्बन्ध” जस्तो सामाजीक विषयलाई मैले “मेरै पारामा” भिडियो यहाँहरु समक्ष ल्याएकी छु । हेरेर जस्तो लाग्छ त्यस्तैं कमेन्ट गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।